Jamba, Manambady, ary Misara-panambadiana: Tantaran-Jazavavy Telo Ao India Amin’ny Andro Maoderina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2016 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, বাংলা, 日本語, Français, English
Sary: Flickr / Ramesh Lalwani / CC BY 2.0
Navoakan'ny Video Volunteers, fikambanam-piarahamonina mpampita vaovao iraisampirenena nahazo loka ao India, ity amboaran-tantara izay niseho voalohany tao amin'ny Facebook ity. Navoaka ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny dikanteny nasiana fanitsiana hita eto ambany.
Manamarika ny Andro Iraisam-pirenena Ho An'ny Zazavavy ny 11 Oktobra, izay manazava ny olana misy fiantraikany eo amin'ny zatovovavy manerana an'izao tontolo izao. Misy tantara vitsivitsy ireto ambany ireto notaterin'ny Video Volunteers, vondrom-piarahamonin'olon-tsotra tia mampita vaovao, mampiseho ny fomba ataon'ireo ankizivavy ao India rehefa miatrika sy miady amin'ny olana isan-karazany mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy .
Notifirin'ny polisy tao Kashmir Raha ‘ Nitazana Teo Am-baravarankelin'ny Lakozia’
Ampolony ny olona matin'ny tafika Indiana ary an'arivony maro hafa no naratra tamin'ny firongatry ny korontana tao Kashmir tantanin'i India tamin'ny Jolay teo. Voalaza fa nampiasa basy “mitsipotipoti-bala”tamin'ireo vahoaka tsy nanaiky nofehezina ny tafika Indiana, eny fa na dia tamin'ireo mpandalo fotsiny aza, izay niafara tamin'ny faharatrana mafy.
Nijery teo am-baravarankely i Sadia ary nitifitra azy teo amin'ny masony ny polisy . YouTube
Voatifitra tamin'ny tsipotipotibala raha nitsangana tao an-dakozia nijery tany ivelany i Sania Tamanna, zazavavy iray 11 taona. Nanagoaka ny masony havia ny bala , ka nahajamba ny ila-masony. Tatỳ aoriana, tsy mbola matoky ireo dokotera raha toa ka hahita tsara indray ny masony taorian'ny fandidiana telo natao taminy .
Moa ve izany no tontolo iriantsika ho an'ny ankizy, tontolo ahitana fiarovana tsy azo antoka eny fa na dia ao an-tranony aza?
Nihaona tamin'i Sania tao an-tranony any Ganderbal i Afroza Mahed :
Tao Amin'ny Tanin'ny Ankizy Ampakarina Ho Vady
India no manana ankizy ampakarina ho vady betsaka indrindra eto amin'izao tontolo izao, izay miisa 240 tapitrisa, na ny ampahatelon'ireo ankizy rehetra ampakarina ho vady manerana izao tontolo izao (araka ny antontanisa 2014).
Tamin'ny 2013, namolavola Drafit'Asa Nasionaly ny Minisiteran'ny Vehivavy sy ny Fampandrosoana ny Ankizy mba hisorohana ny mariazin'ankizy. Tao anatin'ny telo taona izay, na izany aza, mbola miandry ny ampiharana azy ny drafitra.
Araka ny Unicef, 47 isanjaton'ny ankizivavy ao India no manambady alohan'ny faha-18 taonany.
Mexiri avy any Odisha, sarin'ankizy ampakarina ho vady. YouTube
Nanambady teo amin'ny faharoambinifolo taonany i Mexiri avy any Odisha ary nijaly tamin'ny herisetra an-tokantrano nataon'ny vadiny sy ireo havam-badiny. Tamin'ny faha-14 taonany, niteraka zazalahy kely izy ary nijaly mafy noho ny tsy fahampian-dra. Maty ilay zazalahikely herintaona taorian'izay, ary voatery tsy maintsy niteraka iray hafa ao anatin'ny taona i Mexiri. Tamin'ny faha 16 taonany, lasa renin'ny zazakely sembana ara-batana izy ary nolazaina fa mpamosavy. Ankehitriny, 19 taona izy izao ary mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniny, tsy misy fanohanana ara-bola na avy amin'ny vadiny na ireo rafozany.. Mijaly ny zanany noho ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fanampiana avy amin'ny governemanta.
Tena olana lehibe mihatra amin'ny ankizivavy sy ny zatovovavy an-tapitrisany manerana an'i India ny fampakaram-badin'ankizy, ny fampijaliana ataon'ny vady, ny herisetra ara-nofo, ny tsy fisian'ny fitsaboana sy ny fanohanana, ary ny tsy fisian'ny fanohanana ara-bola avy ny amin'ny fitondrana. Mampalahelo fa maro amin'izy ireo no iharan'ny olana mihoatra ny iray amin'ireo voalaza ireo indray miaraka, ka tena sarotra ho azy ireo sy ny zanany ny ho tafavoaka amin'ny fiainana
Kanefa na ao anatin'izany toe-javatra izany aza, dia misy ireo tantaran'ny be herimpo sy ny maherifo tsy mampino .
Dia Maninona Raha Vehivavy Aho: Hoy Ilay Tompondakan'ny Kickboxing Valo Taona
Vehivavy manao kickboxing ao Kashmir. YouTube
Rehefa nikasa ny hanao kickboxing i Tajamul , niezaka ny hampiova hevitra azy tsy hanao izany ny rainy, sady nilaza fa fanatanjahan-tena maherisetra izany ary mety haratra izy. Nisisika anefa izy, ary nampanantena fa hanao ny tsara indrindra mihoatra noho ny ankizilahy rehetra.
Nahatanteraka ny teny fikasany i Tajamul tamin'izy fito taona ary izy no tompondaka nasionaly tanora indrindra tamin'ny mpanao kickboxing zandriny tao India. Nandresy ilay mpifanandrina aminy 13 taona izy ary nahazo ny anaram-boninahitra tamin'ny lalao famaranana nasionaly taona 2015 ka hisolo tena an'India amin'ny fifaninanana izay ho Tompondaka Iraisam-pirenena Kickboxing any Italia amin'ny volana Novambra ho avy izao.
Ankehitriny, tsy mirehareha fotsiny ny amin'ny zanany vavy ny rain'i Tajamul, fa nilaza ihany koa fa manantena azy hanampy ny olona hanova ny toe-tsaina momba ny ankizivavy sy ny fanatanjahan-tena ao an-tanindrazany ao Kashmir. Avy any amin'ny tanàna mitokamonin'i Bandipora, izay tena voafetra aoka izany ny tontolo misokatra ho an'ny ankizivavy, ilay mpisavalalana.
Nandrava ny fiheveran-diso rehetra mikasika ny ankizivavy sy ny fanatanjahan-tena i Tajamul, tena nahomby tamin'ny fanatanjahantena ifanandrinana izy izay mitaky fahakingana, fanazarantena henjana, ary herim-batana be dia be. Manao fanazaran-tena dimy ora isan'andro izy, raha sady mbola mianatra sy manenjika ny zavatra tiany hafa: ny dihy.
Avy amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ao India ny iraky ny vondrom-piarahamonina ‘ Video Volunteers ‘, ary namokatra lahatsary amin'ny tantara tsy misy mpitatitra. “Vaovaon ‘ireo izay miaina izany” ireo tantara ireo. Manolotra ny zava-misy manodidina ny eny ifotony mikasika ny zon'olombelona maneran-tany sy ny olan'ny fampandrosoana izy ireo..